Guddoomiye Cirro Oo Kulan Qarsoodi ah Nairobi Kula Yeeshay Safiirka Soomaliya u Fadhiya Kenya | Maalmahanews
Guddoomiye Cirro Oo Kulan Qarsoodi ah Nairobi Kula Yeeshay Safiirka Soomaliya u Fadhiya Kenya
Magacyada saraakiil xisbiga ka tirsan xisbiga WADDANI oo Cabdiraxmaan Cirro u raadinayo Fiisayaal Maraykan ah
Nairobi (Maalmaha )-Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa kulan qarsoodi ah xarunta dalka Kenya ee Nairobi kula yeeshay safiirka dawladda Federalka Soomaaliya u fadhiya Kenya Md. Jamaal Xasan, waxaana kulankaas kasoo baxaya warar kala duwan oo qaddiyadda Somaliland dhabar-jab ku ah.
Safarka Guddoomiye Cirro oo ahaa mid qarsoodi ah, isla markaana aannu wax faahfaahin ah ka bixinin, ayaa xogaha kasoo baxayaa sheegayaan inuu salka ku hayey ballamo hoose oo uu la lahaa saraakiil katirsan maamulka Muqdisho, kuwaas oo uu kala xaalayey arrimo badan oo dhinaca siyaasadda iyo taageere dhaqaale u badan oo uu xisbigiisa u raadinayey u badan.
Sida qaar ka tirsan saraakiisha safaaradda Soomaalidu ku leedahay magaalada Nairobi warbaahinta u xaqiijiyey, waxa Guddoomiye Cirro dadkii uu kulamada la yeeshay ka mid ahaa Jamaal Xasan oo ah safiirka dawladda Federalka ah u fadhiya Nairobi, waxaana ay labada masuul ka wadahadleen sidii uu safiirku u abaabuli lahaa jawi is af-garad iyo kulamo dheeri ah oo uu guddoomiye cirro la yeesho madax sare oo dawladda Xasan sheikh katirsan.
Guddoomiye Cirro ayaa sidoo kale kulanka uu la yeeshay safiirka Soomaaliya ee Nairobi waxa uu ku faahfaahiyey inuu baahi weyn u qabo xidhiidh furan oo uu la yeesho madaxda sare ee Dawladda Federalka Soomaaliya iyo waliba safiirada kala duwan ee ku magacaaban dalalka Yurub iyo Maraykanka, si ay uga saacidaan arrimaha socdaalka ee saraakiisha xisbigiisa ka tirsan oo ay haatan dhibaato badani ka haysato dhinaca safarrada dibadda.
Baahiyaha ugu waaweyn ee uu guddoomiye Cirro safiirka uu kulanka la qaatay u bandhigay, ayaa waxa kamid ahaa sidii uu safiirku uga hawlgeli lahaa dal-ku-galyo (visas) uu u doonayo saraakiil xisbigiisa WADDANI katirsan, kuwaas oo uu doonayo inay u baxaan dalal dibadda ah.
Xubnaha uu Guddoomiye Cirro safiirka ka dalbaday inuu fiisayaal u raadiyo, ayaa waxa ka mid ah Afhayeen Ibraahim Buubaa, Axmed Cumar Xaaji Cabdillaahi (Xamarji) iyo waliba xubno kale oo xisbiga WADDANI ka tirsan, kuwaas oo u waayey hannaan kale uu fiisayaal Maraykan ah ugu helo.
Safiirka, ayaa guddoomiye Cirro u sheegay inuu intii karaankiisa ah ka saacidi doono helitaanka fiisayaashaas iyo waliba dalabyo kale oo qarsoodi ah oo dhinaca xidhiidh dhaw oo uu guddoomiye Cirro ka dalbaday maamulka Muqdisho ah, waxaana loo ballamay in kulamo dambe la isugu soo noqdo, isla-markaana xidhiidhka la joogteeyo.
Guddoomiye Cirro, ayaa kulankaas ku muujiyey sida ay uga go’an tahay inuu abuuro jawi isu soo dhawaad ah oo dhexmara isaga iyo madaxda Soomaaliya, kaas oo uu safiirkuna hormood ka noqon doono.
Kulanka uu Guddoomiye Cirro la yeeshay safiirka dawladda Somaliya u fadhiya magaalada Nairobi, ayaa ah mid dhabar-jab iyo ceeb ku ahaa qaddiyada Somaliland, isla markaana muujiyey danaha uu guddoomiyuhu hoosta ka wato oo ah qaar ka horiminaya rabitaanka shacabka reer Somaliland iyo gooni-isu-taagoodaba.
Sidoo kale, waxa uu markhaati ka yahay warar hore oo sheegayey in guddoomiye Cirro iyo xisbigiisu xidhiidh dhaw la leeyihiin dawladda Somalia, kaas oo ka mid ah boogaha ugu waaweyn ee xisbigaasi leeyahay, dadkuna uga shakisan yihiin.